Instapage: PPC-All-In-One gị na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Ngwọta | Martech Zone
Dịka onye na-ere ahịa, isi nke mbọ anyị na-anwa ịkọwapụta ire ahịa, ịre ahịa, na usoro mgbasa ozi anyị mere iji mee ka atụmanya anyị gaa njem ndị ahịa. Gaje ịbụ ndị ahịa fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbaso ụzọ dị ọcha site na ntụgharị, agbanyeghị, n'agbanyeghị etu ahụmahụ dị ịtụnanya.
N'ihe banyere mgbasa ozi, agbanyeghị, ego nnweta nwere ike ị dị oke ọnụ… n'ihi ya, anyị nwere olile anya na anyị ga-egbochi ha ka anyị wee lelee ma melite nsonaazụ mgbasa ozi anyị. A ọdịda peeji nke ikpo okwu a na-etinyekarị maka nke a. Lee uru 5:
Ọdịda Peeji Idu
Nweta - site na idebe peeji nke ọdịda site na ụzọ ntụgharị ndị ọzọ, anyị nwere ike nweta nghọta doro anya banyere nloghachi anyị na mgbasa ozi mgbasa ozi.
omume - site na ịmachi njikọ aka na ihe ndị ọzọ, anyị na-emechi nhọrọ na omume anyị na-atụ anya, na-eme ka ha nwee ike ịtụgharị karịa ịchọgharị.
mfe - site na imepụta peeji ndị mara mma, ngwa ngwa, na mfe, anyị na-eme ka o nwekwuo ohere na onye ọbịa ga-agbanwe, n'agbanyeghị ngwaọrụ.
Ndu Ndu - ikike iji gosipụta nke ọma, chekwaa, nyefee, ụzọ, na ịzigharị ndị ndu ka ha dejupụta akwụkwọ ndebanye aha.
Testing - site na iji ikpo okwu nke na etinye usoro nyocha, anyị nwere ike itinye isi okwu dị iche iche, ọdịnaya, mpaghara mpempe akwụkwọ, yana atụmatụ ndị na-eme ka ọnụego ntụgharị gbanwee ọnụ ọgụgụ.
Ihe Nlereanya nke Ibe ọdịda
Rịba ama ụfọdụ njirimara njirimara nke ibe ọdịda dị mfe n'okpuru - belata igodo, ihe dị iche iche siri ike, otu oku na-arụ ọrụ, isi, nyocha, na isi okwu… niile na-eme ka onye ọrụ gbanwee:
Platform ọdịda Page Platform
A bụ ihe a video iwebata na nnyocha nke Instapage ọdịda peeji ikpo okwu:
Ntọala Page Platform Atụmatụ
Onye na-ewu ụlọ nke Instapage na-enyere ndị azụmaahịa aka ịmepụta ihu ọma, peeji nke ọdịda ihu enyi. Site na nhazi mmezi gburugburu, ihe karịrị mkpụrụ akwụkwọ 5,000, na nde 33 nde iji rụọ ọrụ, onye na-ewu ụlọ peeji nke Instapage na-ewe ihe mgbu site na imepụta akara ngosi, peeji nke ọdịda-enyi na enyi. Atụmatụ gụnyere:
Youtskpụrụ ndebiri nke dabere na Industrylọ Ọrụ & Jiri Ikpe - 200 + zuru ezu na-ahazi na kachasị ndebiri ahaziri iji mee ka ntụgharị gị dịkwuo elu.
Mmekọrịta Mgbasa Ozi Anya - Soro ndị otu na ndị ahịa rụkọ ọrụ ọnụ ozugbo ka ịmee usoro nyocha a. Mee ka ibe gị mepụta, nyochaa, bipụtara, ma gbanwee ngwa ngwa.
ụdị Nrụpụta - Add customizable forms with multiple ubi, ndọpụta ndepụta, ma ọ bụ redio bọtịnụ dị nnọọ ole na ole clicks. Nweta ihe omuma ndi ozo site na olile anya gi site na igbanwe udiri ihe di otutu. Belata isi okwu ma mee ka ndị ọrụ tinye aka na akara gị.
Ndu Ndu - Chekwaa, gafere, mbupụ, ma ọ bụ ụzọ na-eduga na Instapage ma ọ bụ tinyekọta ma nyefee ha na CRM gị ma ọ bụ mwekota ndị ọzọ. Nata ozi email na akara ngosi mgbe ị na-ebute ndu ọhụrụ.
Ozi Nkwenye - Hazie ozi nkwenye na-egosi mgbe ndị ọbịa mezue ụdị gị.
Daalụ & Akwụkwọ Nkwenye - Mee ka ndị debanyere aha gị kachasị ọhụrụ mara na ị nwere ekele maka mmasị ha nwere mgbe ha nyefere ozi ha n’ụdị nhọrọ ị chọrọ iji ihu na ihu gị.
Nweta Dijitalụ - Zọpụta onwe gị nzọụkwụ site na ịtọlite ​​ihe akpaka dijitalụ Asset nnyefe usoro. Ole na ole clicks ị nwere ike hụ na mgbe gị na opts-na maka na-enye, ọ mere ka ha maka ozugbo download.
Mbido - Mee ngwa ngwa weta ọtụtụ peeji nke ahaziri iche site na iji ngọngọ ibe ọ bụla ị nwere ike hazie, chekwaa ma jiri ya. Họrọ site na nhọrọ nke ndebiri ndebiri emebere ụzọ, dịka nkụnye eji isi mee, ụkwụ, ịgba akaebe, na ndị ọzọ, ma ọ bụ mepụta ngọngọ nke gị site na ncha.
Wijetị - N’ịgbakwunye agbakwunye ọrụ maka ọdịda peeji gị na wijetị.
Ihe Mgbochi Ekwentị - Nweta ihu igwe na-anabata ngwa ngwa na naanị otu pịa. Maka ịhazi ọzọ, ịnwere ike zoo ngọngọ peeji maka elele mkpanaka iji mepụta ahụmịhe nchọgharị kachasị mma. Mee ka mgbanwe site na ịmepụta ahụmịhe mkpanaka kachasị mma maka ndị ọbịa gị, na-ejighi onye mmepe.
Ihe Mgbochi Global - Jikwaa ndebiri ụwa niile n’enweghị mbọ ọ bụla iji hụ na ibe niile dakọtara. Mee omenala, on-brand Instablocks dị ka nkụnye eji isi mee, n'okpuru, ma ọ bụ ngwaahịa ngwaahịa iji jiri ọtụtụ narị ma ọ bụ puku peeji. Mgbe ahụ, dezie otu ngọngọ ozugbo ma gbanwee mgbanwe gị na ibe ọ bụla ngọngọ ahụ pụtara.
Wepụ Intent Popups & Cadị Capture msdị - Mepụta pop-elu mmapụta gbasie dabere na kpọmkwem triggers na OptinMonster, onye na - eweta ngwanrọ popup software, iji bulie ọnụego ntụgharị na peeji ọdịda gị.
Omenala Fonts (Google & Typekit) - Omenala Akara ókwú na-enyere gị aka igosi akara gị. Instapage bụ naanị ikpo okwu na-enye ohere ịnweta 5,000 + adịchaghị Webfonts ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 ugboro karịa nhọrọ ederede karịa sọftụwia ọ bụla ọzọ na ahịa.
Ihe Njikwa Ihe Onyonyo - Tinye ma dezie foto nke gị n'ime ngwa nhazi ngwa ngwa ngwa ngwa iji meziwanye nkwalite ma ọ bụ onyinye gị.
Ezi Server-n'akụkụ A / B Split Testing - Na-ebuli peeji nke ọdịda gị maka ntụgharị na ike nyocha A / B na ihu akwụkwọ ọdịda ọkọlọtọ anyị na ibe AMP. Sochie omume ndị ọbịa, nwalee ọdịiche dị iche iche na ihe ọhụrụ, nhazi, na / ma ọ bụ atụmatụ, ma bulie ọnụego mgbanwe gị.
Peeji AMP - Wụpụta mpempe akwụkwọ mkpanaka na-ebu ngwa ngwa, mepụta ahụmịhe nchọgharị ka mma, ma jiri ibe Google AMP kwadoro peeji AMP ga-emekwu mgbanwe. Instapage nwere naanị onye na-ewu ụlọ nke na-enye gị ohere ịmepụta na peeji A / B na-agba ọsọ na-eji usoro AMP, ọ dịghị onye nrụpụta chọrọ.
Template Bulite & Budata - Ngwa ngwa na ngwa ngwa bulite ndebiri site na ThemeForest (ma ọ bụ mepụta onwe gị site na ọkọ). Download ịkọrọ gị ọdịda peeji nke aghụghọ na ụwa.
Weghachi Nchedo - Meziwanye arụpụtaghị ihe na ịhazi usoro ọrụ ya site na igbochi ndị ọrụ ịdegharị ọrụ ibe ha.
Versioning - Weghachi nsụgharị ndị mbụ nke ibe ọdịda maka udo nke uche mgbe ị na-eke, ịmepụta, ma ọ bụ dezie.
Heatmaps - Heatmaps na-enye nkọwa zuru ezu banyere otu esi eleta ndị ọbịa gị na peeji nke ọdịda gị. Nke a ka mma ịgwa gị maka ihu igwe nke ule A / B.
Nchịkọta ntụgharị - Gbanye na Google AdWords na Analytics maka njirimara dị mfe ma mee ezigbo oge-kwa-eleta na ọnụọgụ ego ọ bụla ga-ahụ nke ọma na ikpo okwu Instapage. Mgbe ahụ, gafere ụzọ metadata gbadaa na CRM ma ọ bụ usoro akpaaka ahịa gị.
Idebe-Na Pixel Ndepụta - Jiri ndetu-na pixel nsuso soro mpụga tọghatara ma ọ bụ n'ihi na retargeting ọbịa na-adịghị tọghata gị ọdịda peeji.
Nchịkọta peeji nke maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi - Instapage emeela ka njikwa mgbasa ozi dị mfe ka ndị ahịa PPC nwee ike iwulite otu mgbasa ozi ngwa ngwa maka ọwa mgbasa ozi ha dị iche iche, ngwaahịa, atụmatụ, na ngosipụta mmadụ.
Akụkọ gbasara oge - Inweta ezigbo oge data, karịrị oge ọ bụla, gafee ngwaọrụ gị niile.
Personalization - Mee ngwa ngwa puru iche 1: 1 ad-to-peeji post-pịa ọdịda peeji nke ahụmahụ maka ndị na-ege ntị na Ahụmịhe Ahụmịhe. Mee ka ndị ahịa gị nwee ọmarịcha ahụmịhe peeji nke ga - enyere gị aka ime ka mgbanwe dị elu, bawanye mgbasa ozi dijitalụ ROI, ma belata ọnụ ahịa nnweta.
Mmekọrịta - Jiri ngwa jikọtara Instapage na ojiji nke taa, mgbasa ozi nke atọ, nchịkọta, CRM, ịre ahịa email, na nyiwe akpaaka ahịa.
Bido na Instapage
Landlọ Ọrụ Icheta Ibe Ọdịdị Platform Gụnyere
Maka Paykwụ na Paygwọ Kwa Pịa (PPC) na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, Instapage bụ azịza ụlọ ọrụ zuru oke. Atụmatụ maka ụlọ ọrụ gụnyere:
Nnabata Akaụntụ - Mfe jikwaa ọtụtụ ndị ahịa na akaụntụ site na ịgbanwee n'etiti akaụntụ gị na-enweghị ịbanye na akaụntụ dị iche iche. Lelee ndepụta nke akaụntụ ị nwere ike ịbanye, gbanwee gaa na akaụntụ ahụ ịchọrọ ịrụ ọrụ na ya, ma lelee ozi akaụntụ / onye nwe ya maka akaụntụ ahụ ị dị ugbu a n'ime otu njikọta ejikọtara ọnụ.
Ulo oru nkeonwe nke ndi ahia - Hazie oghere ọrụ otu, jikwaa mmekọrịta ndị otu, ma jigide nzuzo nke ndị ahịa site na ịkpọ ndị otu ka ha rụọ ọrụ ụfọdụ. Nwere ike inye ohere ịnweta ngalaba na-ebipụta akwụkwọ ngwa ngwa na ngalaba ọrụ ụfọdụ, jikwaa njikọta ọdịnala yana, jiri obi ike bipụta ya na CMS mpụga site na usoro akara.
Ikike Otu Otu - ringkekọrịta ọrụ gị na otu ma ọ bụ ndị ahịa apụtaghị ịhapụ ozi nbanye gị. Na Instapage, ị nwere ike ịnye ohere gụrụ naanị ndị otu ndị otu ma ọ bụ ndị metụtara ya, maka ibe maka ọdịda dabara.
Na-ekwusara na Unlimited ngalaba - N'adịghị ka nyiwe ihu igwe ndị ọzọ, Instapage na-enye gị ohere ibipụta peeji dị ka ọtụtụ ngalaba pụrụ iche gafee ọtụtụ usoro njikwa ọdịnaya.
Rịọ otu ngosipụta
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ m maka Ntughari, Okwu, na OptinMonster Ebe a.
Tags: ad ọdịda peejiụlọ ọrụ ọdịda peeji nke ikpo okwupeeji nke mgbasa ozi ọdịdantughari ntughariụdị onye na-ewu ụlọgoogle adwordsNtugharimwekotaọdịda pageọdịda peeji na-ewu ụlọọdịda peeji nke ihe atụọdịda peeji nkeọdịda peeji nke njikarịchaọdịda peeji nke ikpo okwundu nduụdị ndu ejidepopupppc